AKANIN’NY ZANDARIMARIA :: Potiky ny afo ny tranon’ny ankizivavy kamboty • AoRaha
AKANIN’NY ZANDARIMARIA Potiky ny afo ny tranon’ny ankizivavy kamboty
Tsy nisy noraisina fa kilan’ny afo ny trano iray fitaizana ireo zazavavy kamboty navelan’ireo zandary namoy ny ainy eny amin’ny Akanin’ny Zandarimaria any Arivonimamo, ny alin’ny 5 desambra lasa teo. Potika avokoa ny entana rehetra tao amin’ilay trano. Tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy, saingy lasa lavenona ny kojakoja ilain’ireo zaza kamboty.
“Tsy fantatra ny niandohan’ny afo fa nisy ankizy iray sendra nivoaka no nanaitra ny tompon’andraikitra rehefa nahita ny loza. Taorian’izay no navoaka haingana ireo ankizivavy mbola natory tao amin’ilay trano. Nanokatra famotorana ny zandary misahana ny heloka bevava, androany (ndlr : mantsy ny omaly). Fantatra tamin’ny famotorana fa tsy niniana natao ilay afo”, hoy ny fanazavana azo avy eo anivon’ny fibaikoana ny Zandarimaria.
Vantany vao naheno ity tranga ity ireo tompon’ andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimaria dia nidina tany an-toerana avy hatrany notarihin’ny jeneraly Randrimanarina Jean Christophe, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria sy ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, Kaomandin’ny Zandarimaria.
“Ankoatra ny fiarahabana tsy maty fo aman’aina sy fampaherezana ireo ankizy kamboty dia noezahina ny nanome fanampiana azy ireo mba tsy hieritreretan’izy ireo ny maha kamboty azy, indrindra amin’izao andro sarotra izao”, hoy ireo tompon’andraikitry ny Zandarimaria ireo.
Loza teny Fenoarivo Tratra ilay taksiborosy nandona mpandeha motô
Famonoana mpitandro filaminana Nogadraina ilay nanindrona antsy zandary
Fahatrarana Afrikana Mpiambina nangalatra menaka Mitentina roanjato tapitrisa ariary
Fiondranana an-tsokosoko Mpitsoa-ponenana efa-dahy tratra tany Nosy Be
FIFANDONANA MAHERY VAIKA :: Zandary telo indray matin’ny dahalo